Asa 23 - Ny Baiboly
Asa toko 23
Ny nandaharan'i Paoly teo anatrehan'ny Sanedrina - Ny niraisan'ny Jody tetika hamono azy - Ny nitondrana azy ho any Sezarea.
1Dia nibanjina ny Sanedrina i Paoly ka nanao hoe: Ry rahalahy ô, nitondra tena tsara teo anatrehan'Andriamanitra tamin-kitsim-po tokoa aho mandraka androany. 2Tamin'izay i Anania mpisorona lehibe dia nandidy ny mpiandry raharahany hamely tehamaina ny vavany, 3ka hoy Paoly: Hokapohin'Andriamanitra tokoa hianao, ry rindrina voalalotra fotsy, fa mipetraka eto hitsara ahy araka ny Lalàna hianao, nefa mampamely tehamaina ahy tsy ara-dalàna. 4Dia hoy ny olona nanatrika teo: Tevatevainao lahy ny lehiben'ny mpisoron'Andriamanitra! 5Ary namaly Paoly ka nanao hoe; Tsy fantatro ho mpisorona lehibe izy, ry rahalahy, fa voasoratra hoe: Aza manevateva ny lehiben'ny vahoaka.
6Nony fantatr'i Paoly fa Sadoseana ny sasany tamin'izay teo ary Farisiana ny sasany, dia niantso teo amin'ny Sanedrina izy nanao hoe: Ry rahalahy, izaho dia Farisiana, zanaky ny Farisiana, ary ny amin'ny fanantenantsika ny hitsanganan'ny maty no itsarana ahy. 7Vao nilaza izany izy dia nifanditra ny Farisiana sy ny Sadoseana, ka nizara roa toko ny olona teo. 8Fa ny Sadoseana manao hoe: Tsy misy fitsanganan'ny maty, ary tsy misy koa izay hoe anjely na fanahy; nefa ny Farisiana kosa mino ireo zavatra ireo, 9ka tabataba nankarenina no niseho. Ary nisy mpanora-dalàna sasany tamin'ny antokon'ny Farisiana, nitsangana ka nanohitra hoe: Tsy hitanay izay azo anomezan-tsiny an'io lehilahy io, fa angamba fanahy na anjely anankiray no niteny taminy. 10Vao mainka nitombo anefa ny fifandirana. Efa nataon'ny komandy hotetehin'ny olona teo mihitsy Paoly, ka nasainy nidina ny miaramila haka azy an-kery teo afovoan'ny vahoaka, sy hitondra azy ho any anaty rova.
11Nony alina dia niseho tamin'i Paoly ny Tompo ka nanao taminy hoe: Matokia, fa tahaka ny nanambaranao ahy tatý Jerosalema no tsy maintsy hanambaranao ahy any Roma koa.
12Vao naraina ny andro, dia nisy Jody niray tetika, niozona sy nianiana fa tsy hihinana na hisotro, raha tsy efa nahafaty an'i Paoly. 13Tsy omby efa-polo izy no niray tetika hanao izany. 14Dia lasa nanatona ny lehiben'ny mpisorona sy ny loholona izy, ka nanao hoe: Efa nianiana mafy izahay fa tsy hanendry hanina raha tsy efa nahafaty an'i Paoly. 15Koa ankehitriny, aoka hianareo sy ny Sanedrina hilaza amin'ny komandy mba hampidina azy hankaty aminareo, mody te-hamototra ny aminy lalindalina kokoa; ary izahay kosa amin'izany dia efa vonon-kamono azy alohan'ny hahatongavany atý.
16Ren'ny zanak'anabavin'i Paoly izany teti-dratsy izany, ka nidodododo nankany anaty rova faingana izy, nampandre an'i Paoly. 17Dia niantso anankiray tamin'ny kapiteny i Paoly ka nanao taminy hoe: Ento kely ity tovolahy ity ho any amin'ny komandy, fa misy zavatra holazainy aminy. 18Dia noraisin'ny kapiteny razazalahy, nentiny tany amin'ny komandy, ka hoy izy: Niangavian'i Paoly mpifatotra hitondra an-drazazalahy ity ho atý aminao aho, fa misy zavatra holazainy aminao, hono. 19Noraisin'ny komandy tamin'ny tànany ilay zazalahy, nentiny nitanila kely, dia nanontaniany hoe: Inona no holazainao amiko? 20Ary hoy ny navaliny: Nifanaiky ny Jody, fa hangataka aminao hampidina an'i Paoly ho eny amin'ny Sanedrina rahampitso, mody hoe hamototra lalindalina kokoa ny aminy; 21nefa aza manaiky izany, fa misy efa-polo mahery izy no niray tetika hamely azy, sady efa nanozon-tena sy nianiana fa tsy hihinana na hisotro ambara-pamonony azy. Ary izao dia efa vonona izy ireo, fa ny teny avy atý aminao sisa andrasany. 22Dia nalefan'ny komandy razazalahy ka tsy navelany hiteniteny na amin'iza na amin'iza fa hoe nilaza izany taminy izy.
23Dia niantso kapiteny roa lahy izy ka nanao tamin'ireo hoe: Manomàna miaramila roan-jato, sy an-tsoavaly fito-polo, ary an-defona roan-jato, hankany Sezarea anio alina amin'ny ora fahatelo. 24Ary manomàna soavaly hitaingenan'i Paoly koa, hitondranareo azy soa aman-tsara ho any amin'i Félix governora. (Fa natahotra izy sao tsoahan'ny Jody eny Paoly, dia hovonoiny, ka ny tenany indray no ho voahoso-dratsy hoe nandray vola any aoriana any). 25Dia nanoratra taratasy nisy izao teny izao izy: 26Avy miarahaba an'i Félix tsara indrindra aho Klaody Lisiasy. 27Nosamborin'ny Jody ity lehilahy ity, ary efa ndeha hovonoiny; nefa nony fantatro fa hoe Romana izy, dia nitondra miaramila aho ka nanafaka azy. 28Te-hahalala ny heloka niampangany azy aho, ka nitondra azy nankeo amin'ny Sanedrina. 29Dia hitako fa ady hevitra momba ny Lalàny no nitoriana azy, fa tsy nanao ratsy tokony hanamelohana azy ho faty na hanaovana azy an-tranomaizina akory izy. 30Ary izao vao reko indray fa hoe misy Jody miray tetika hamono azy, ka izy moa nampanateriko faingana hankaty aminao; ry zareo mpiampanga azy koa nasaiko hilaza izay itoriany azy atý aminao. Veloma.
31Dia noraisin'ny miaramila i Paoly, ka nentiny nankany Antipatrisy iny alina iny ihany, araka ny didy azony. 32Nony ampitso, dia ry zareo an-tsoavaly no nasainy nanohy ny dia niaraka taminy, fa izy ireo kosa niverina nankany anaty rova. 33Rahefa tonga tany Sezarea izy ireo, dia natolony ny governora ny taratasy, ary narosony teo anatrehany koa i Paoly. 34Nony voavakin'ny governora ny taratasy, dia nanontany izay faritany nihavian'i Paoly izy, ka nony fantany fa avy any Silisia izy, 35dia hoy izy hoe: Hihaino anao aho rahefa tonga ny mpiampanga anao. Dia nasainy nambenana tao an-dapan'i Heroda izy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0593 seconds